Sida loo ogaado inuu jacayl yahay ama saaxiibtinimo ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sida loo ogaado haddii ay tahay jacayl ama saaxiibtinimo. Waa caadi in la dareemo jahawareer markaan ku jirno caankaas «aagga saaxiibka" Waxaad is waydiisaa: Sidee ku ogaan kartaa inay tahay saaxiibtinimada ama wax kale? Ma doonaysaa in aad ogaato haddii aad dhab ahaantii ku jirto aagga saaxiibtinimo ama haddii qofka aad daryeesho uu sidoo kale calooshiisa ku jiro balanbaalis marka ay ku soo eegaan? Si aad u hubiso, akhri maqaalkan talooyin iyo si aad u ogaato calaamadaha daahsoon ee xiisaha ragga.
1 Sida loo ogaado haddii ay tahay jacayl ama saaxiibtinimo iyada oo loo marayo calaamadaha qaar
1.1 1. Wax walba ayay kuu sheegaysaa
1.2 2. Qof kale ka hadal
1.3 3. Wuxuu ku siinayaa naanaysyo
1.4 4. Waxaad tahay garab lagu ooyo
1.5 5. Dareen cabsi dhankaaga ah
1.6 6. Isku day inaad u dhaqanto sida Cupid
1.7 7. Xiriirka jirka
Sida loo ogaado haddii ay tahay jacayl ama saaxiibtinimo iyada oo loo marayo calaamadaha qaar
Ogow haddii ay tahay jacayl ama saaxiibtinimo iyada oo loo marayo calaamadaha
Dabcan, kiis kastaa wuu ka duwan yahay. Dadku si kala duwan ayay u falceliyaan waxayna sidoo kale u dhaqmaan si ka duwan. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay taasi jirto, waa suurtagal calaamadee calaamadaha qaarkood si aad u fahamto haddii ay jiraan wax kale mise waa saaxiibtinnimo fiican.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in aysan jirin wax faa'iido ah oo lagu noqdo jahwareer oo laga fekero in faahfaahin kasta ay tahay calaamad: Kiimikada iyo wada noolaanshaha idinka dhexeeya ayaa aad uga qiimo badan buug kasta ama hage kasta. Laakin si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la tilmaamo qodobbada qaarkood oo u muuqda inay ka dhex muuqdaan dadka oo dhan marka ay xiiseynayaan qof.
1. Wax walba ayay kuu sheegaysaa
Had iyo jeer ka fikir: ma waxaad tahay qofka saaxiibkaa uu eegayo inuu la hadlo marka ay dhibaatooyin la kulmaan? Waxaa laga yaabaa inaad runtii ku jirto aagga saaxiibtinimo. Marka xamaasada la isu celiyo, waxaa jira a hawada qarsoon iyo dareenka. Markaa had iyo jeer la wadaag gabi ahaanba wax walba oo noloshaada dhaca Adiga, isagu ma samaynayo dadaalka ugu yar si uu kuu cajabiyo ama u abuuro niyaddaa filashooyinka. U badan tahay ku arag saaxiib kaliya.
2. Qof kale ka hadal
Markaad is weydiiso: Sidee ku ogaan kartaa inay tahay saaxiibtinimada ama wax kale? Tani waa laga yaabaa inay tahay calaamada ugu cadcad ee qof kuu arko saaxiib. Haddii uu bilaabo inuu ka hadlo jacaylka qof kale, hubaal waxaad ku jirtaa aagga saaxiibtinimo. Si la mid ah waa run markuu ku weydiiyo talo jacayl isagoon xitaa ku fekerin inaad xiisaynayso isaga.
3. Wuxuu ku siinayaa naanaysyo
Haddii uu yahay noocaas Wuxuu kuugu yeeraa naanaysyo qurxoon sida "walaashii ama walaal", waxaa laga yaabaa inaadan dareemin xamaasadda xad dhaafka ah ee dhinacaaga mustaqbalka la filayo. Taas macnaheedu maaha in wiilka ama gabadhu aanay weligood ku arki karin indho xamaasad leh, waa uun in hadda aad tahay saaxiib.
4. Waxaad tahay garab lagu ooyo
Calaamad kale oo digniin ah oo muujinaysa inaad qayb ka tahay aagga saaxiibtinimada waa marka qofku kuu soo jeesto marka uu xidhiidh kale dhammaado. Ka fiirso xaaladahan, sababtoo ah waa suurtogal taas kaliya noqo garab saaxiibtinimo oo lagu ooyo xaaladaha ay adagtahay in wax laga qabto.
5. Dareen cabsi dhankaaga ah
Tani waa calaamad kale oo caadi ah oo aagga saaxiibtinimo. Marka dareenku yahay jaceyl, waa wax caadi ah in qofka uu dareemo neerf. Haddii uu u muuqdo mid aan degganayn, bilaabo inuu ku qosliyo waxyaabo aan qosol lahayn, ama isku dayo inuu si uun kuugu soo jiito, waxay calaamad u tahay in laga yaabo in jacaylkani uu dhaafo wehelnimada. Xiriirka saaxiibtinimo, qofku wax dadaal ah kuma sameeyo inuu isku dayo inuu soo jiito ama ka farxiyo qof kale.
Calaamad kale oo caadi ah oo saaxiibtinimadu waa marka uu wax sheego isaga oo aan welwel yar ka qabin sida aad uga falcelin doonto waxa uu ku yiraahdo, taas oo ah, ma jiraan wax walaac ah oo ku saabsan sida aad uga falcelin doonto.
6. Isku day inaad u dhaqanto sida Cupid
Sidee ku ogaan kartaa inay tahay saaxiibtinimada ama wax kale? Calaamadani waa sahlan tahay! Ma waxaad ka hadlaysaa qof kula qabsanaya? Weligaa ma isku dayday inaad qof kale shukaansato? Hal calaamad kale oo digniin ah. Sidaa darteed, had iyo jeer fiiro gaar ah u yeelo faahfaahintaas ama, xitaa ka sii xun, haddii marka aad baxdo, waxaad qaadataa saaxiib sababtoo ah waxaad u maleyneysaa inaad sameyn karto ciyaarta ugu fiican.
7. Xiriirka jirka
Marka dareenku yahay mid labada dhinac ah, waa caadi raadso salaaxid iyo xiriir jireedAma ciyaarta dhexdeeda ama marmarsiiyo looga dhigo in la isu soo dhawaado. Haddi tani waligeed kugu dhicin, xitaa marka ay jirto fursad, waa sababtoo ah ma doonayo inuu sii wado xiriir gaar ah oo jirka ah.
Luuqadda jidhku wax badan ayay ka sheegtaa qofka kale, laakiin waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato. Had iyo jeer aad uga taxadar inaadan u malayn in wax kasta oo ay gabadhu ku samayso jidhkeeda ay calaamad u yihiin xiisaha sababtoo ah waxaad noqon kartaa mid caajis ah oo waxaad arki kartaa tilmaamo aan waxba ka jirin.
Sida loo caqli badan yahay